SP 19/ PS sy SP 10 Taona – FJKM
Synodamparitany Iarivo Avaradrano (19)
Fahafolo taona niaraha-niasa tamin’ny P. S mianakavy
Fotoan-dehibe roa sosona no natao tamin’ny Sabotsy 26 Mey 2019 teo dia ny fanamarihana ny faha 10- taonan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Prezida Synodaly RABETOKOTANY Miarilaza Andriamialy Mpitandrina sy ny ankohonany niaraka tamin’ny Synodamparitany Iarivo Avaradrano no sady andron’ny Prezida Synodaly.
Nisy filaharambe nialoha ny fanompoam-pivavahana natao tao amin’ny FJKM AVARATSENA FANANTENANA Talata ny Volonondry. Nitarika ny fotoana tamin’izany Atoa RAMAMONJISOA Philbert Mpitandrina Filoha Mpanampy Synodamparitany ary ny nitondra ny Tenin’ Andriamanitra kosa dia Atoa RADIMISAON Jonah Mpitandrina, Sekretera jeneralin’ny FJKM, ny teny faneva ny fankalazana no nangalana ny hafatra hoe: » Izaho, Jehovah efa niantso anao tamin’ny fahamarinana sy nitantana ny tananao ary hiaro anao Aho ho fanekena ho an’ny olona, ho fanazavana ny jentilisa » Isaia 42 : 6
Miantso olona ny Tompo, hoy izy, ary miahy izay irahiny, ataony izany ho fahazavan’ izao tontolo izao.
Nisy fandraisam-pitenenana maro samihafa ho fisaorana an’ Andriamanitra sy ho fampahatsiahivana ny zava-bita tao anatin’ny 10 taona dia Izay nahafaly sy ireo olana nanahirana ihany koa. Nisy ny fanomezana nomen’ny SPIA tamin’izany, ary nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Nivoaka tamin’io koa ny boky misy ny tantaram-piainan’ny PS.